Muuqaalada keydka iyo Goobaha Kheyraadka Saameynta Fiidiyowga
B-duub, muuqaallada saamiyada, muuqaalka wararka, muusikada, fiidiyowyada asalka ah, kala-guurka, jaantusyada, jaantusyada 3D, 3D-yada fiidiyowga ah, tusaalooyinka fiidiyowga ee fiidiyowga ah, saamaynta dhawaaqa, saamaynta fiidiyowga, iyo xitaa fiidiyowyada fiidiyowga ee buuxa ee fiidiyowgaaga soo socda ayaa laga iibsan karaa khadka tooska ah. Maaddaama aad raadineyso inaad hagaajiso horumarkaaga fiidiyowga, xirmooyinkaani waxay run ahaantii dardargelin karaan wax soo saarkaaga fiidiyowga waxayna ka dhigi karaan fiidiyowyadaadu inay u muuqdaan kuwo aad u xirfad badan qayb ka mid ah waqtiga.
Haddii aad aqoon u leedahay farsamada casriga ah, waxaad xitaa rabi kartaa inaad ku quusato inaad iibsato muuqaallo. Qaar ka mid ah animations-yada, tusaale ahaan, waxay la yimaadaan tilmaamo cajaa'ib leh oo ku saabsan sida wax looga beddelo fiidiyaha, loo beddelo, astaamaha, loo beddelo qoraalka, iwm adigoon noqon saaxir animation ah.
Waa tan tusaale fiican. Fiiri tan Xirmada Whiteboard ka Videohive - waad ka faa'iideysan kartaa dhammaan muuqaallada kala duwan ee horay loo sii diyaariyey si aad u dejiso fiidiyowgaaga sharraxa ah!
Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sii deyso fiidiyoow fiican kadib Dhibaatooyinka Kadib ee ku saabsan codsigaaga cusub ee iPhone. Si fudud u iibso ah iPhone Catalog ka BlueFX oo waad baxaysaa!
Waxaa jira boggag dhowr ah oo aad runtii ka faa'iideysan karto kuwaas oo ka baari doona in ka badan 50 goobood oo duubitaan ah oo laga helo internetka oo dhan. Baadhid Footage.net.
Goobaha Muuqaalka Muuqaalka Stock
Waa kuwan liistada kheyraadka weyn ee loogu talagalay helitaanka fiidiyowga fiidiyowga ee bilaashka ah ee shirkaddaada soo socota Goobta aan aadka u isticmaalo sababtoo ah noocyadeeda kala duwan iyo qiimaha jaban waa Depositphotos. Hadaad fiidiyow ku raadisid goobta baaritaanka, natiijooyinka waxay noqon doonaan fiidiyoow. Ama, waxaad ka dooran kartaa fiidiyow hoos u dhigista raadinta.
123RF - HD sawirada saamiyada iyo fiidiyowyada
Adobe Stock - U soo qaad fikradahaaga ugu fiican nolosha kaydka ugu fiican leh.
Da'da Fotostock - fiidiyowyo bilaash ah oo xuquuq maamul leh.
Alamy - In ka badan 55 milyan oo sawir tayo sare leh, vektoryo iyo fiidiyowyo
Clipcanvas.com - Ujrada liisanka hal-mar, Isticmaalka joogtada ah, adduunka oo dhan, warbaahin kasta, qaab kasta, soo degsasho badan
Dhaqdhaqaaqa Corbis - waxyaabo tayo sare leh oo hal abuur leh iyo tifaftir si joogto ah loo cusbooneysiiyo
Depositphotos - A kafaala Martech Zone!
DigitalJuice - Saamaynta fiidiyowga iyo soo dejinta muuqaallada.
Kala saar - Muuqaal HD oo loogu talagalay sheekeeyaha muuqaalka maanta
Istockphoto - Raadi fiidiyow kayd ah
Dhaqdhaqaaqa - Aasiya-Dhiirrigelinta muuqaallada saamiyada iyo animation
FilimyadaTools - 2D animation animation gebi ahaanba bilaash ah iyo animations asalka 3D, saddex meelood meel hoose iyo in ka badan
Plixs - ka raadi kumanaan sawirro bilaash ah oo tayo sare leh iyo fiidiyowyo fiidiyowyo leh ruqsadda CC0.
Pond5 - suuqa warbaahinta saamiyada
Dhaqaalaha - muuqaal fiidiyow ah oo fiidiyow ah oo la awoodi karo, ka dib mashaariic saameyn ku leh, muusig iyo saamaynta codka
Shutterstock - fiidiyowyada saamiyada ee bilaashka ah
Muuqaalada Hantida - muuqaal fiidiyow oo tayo sare leh oo leh ruqsado lacag la'aan ah iyo rukhsado la maareeyay. Muuqaalada Ultra HD waxaa loo heli karaa in lagu soo dejiyo 1080p.
Xirmooyinka Sheeko - ilaha rukunka-ku-saleysan ee soo degsashada muuqaallada kaydka ee boqortooyada-bilaashka ah, asalka dhaq-dhaqaaqa, Mawduucyada Kadib Saamaynta iyo inbadan.
Videohive - faylasha fiidiyowga ee bilaashka ah
vimeo - Fiidiyow gaar ah, fiidiyow oo bilaash ah, oo ay doorteen tafatirayaasha Vimeo.
Fiidiyowyada YayImage - In ka badan 250,000 HD iyo 4K fiidiyowyo fiidiyoow ah oo qiimo jaban lagu heli karo.
Oo haddaad jeclaan lahayd qaar ka mid ah muuqaallada caadiga ah, hubi Arkiifiyada Filimka Internetka!
Xusuusin: Waxaan ku leenahay xiriiriyeyaal xiriir la leh boostadan!
Tags: 123RFadobeadobe stockka dib markii saamayntaka dib markii arrimo arrimoDa'da FotostockalamyQaab kastawarbaahin kastab-duubXusuus-qorka Mobilka ee BBCbluefxClipcanvasDhaqdhaqaaqa CorbisDigitalJuiceKala saarfootageraadinta sawiradaFramepoolmuuqaal duuban oo bilaash ahhelidiMovieArkiifiyada Filimka InternetkaistockphotoFiidiyowyada Suuqgeyntaasalka dhaqdhaqaaqacunsurrada dhaqdhaqaaqaFilimyadaToolssoo degsasho badanKhidmadda hal-maristicmaal joogto ahPond5Dhaqaalahaxuquuqdalacag la'aan boqornimadaShutterstockanimation kaydkaMuuqaalada Hantidasaamiga videomuuqaal video stock ahxannibaado sheekowareejintaXannibaadaha Fiidiyowgasaameynta sawiradamuuqaalka fiidiyowgakala guurka fiidiyowgaVideohivekaydka vimeobaalasha caddunida oo dhan
Jan 9, 2014 saacadu markay ahayd 12:02 PM
Waad ku mahadsan tahay sheegista, Douglas! Aad baa loo qiimeeyay.
Agoosto 18, 2014 saacaddu markay ahayd 11:20 PM
Waad ku mahadsantahay ka mid ahaanshaha 'MotionElements' liiskan dhammaystiran ee Suuqyada Suuqa Warbaahinta weyn.
Hubso inaad booqato oo aad tijaabiso VisualSearch cusub oo ku habboon si aad si dhakhso leh uga hesho waxyaabaha ku jira.